Schrenker Faked Death Kuti Idzivirire Financial Trouble
Marcus Schrenker Faked Death Kuti Idzivirire Financial Trouble
Mutungamiri Wemari Wepfuma Akabhururuka Kubva Pari, Faked Death Kuti Idzize Kutengesa Mhosva
Mutengi webhizimisi wemabhizimisi uye maneja wemari Marcus Schrenker akaita nhepfenyuro munaJanuary 2009, apo akaedza kupukunyuka migumisiro yevanokuvadza vatengesi kuburikidza neparachutti kunze kweadiki -injini prop ndege muedza kuuraya funga rake.
Pane imwe nguva, Marcus Schrenker aiva nezvinhu zvose. Akanga ane zvikwereti zvitatu zvekutsvaga mazano, akagara nemudzimai wake nevana mumusha weIndia wePadist weGeist, mune $ 3 Mamiriyoni emadhora emvura musha waiva nechiteshi uye hombe huru yekushambira.
Kubhururuka kwaiva chido chake uye aiva ne ndege mbiri dzaaiwanzoenda pazororo. Asi munaJanuary 2009, zvose zvakawira pasi.
Idyllic Upenyu kune kunze
Marcus Schrenker akaberekwa musi waNovember 22, 1970. Akakurira muMerrillville, Indiana iyo iri muChicago mutaundi. Muna 1989 Schrenker akapedza kudzidza kubva kuMerrillville High School, ndokubva apinda koreji paYunivhesiti yePurdue. Yaiva paPurdue yaakasangana nayo (yaimbova mudzimai) Michelle, vakaroorana uye pamwe chete vaiva nevana vatatu pamwechete.
Sezvo zvakajeka sokuti upenyu hwaSchrenker hwakaonekwa, panewo rutivi rune rima iro avo vaigara naMarcus kana kuti vakamupoteredza vainyatsoziva kusvika pakuona kusuruvara paakanga aripo.
Schrenker yaizobva pakushamwaridzana uye kushamwaridzana nekutsamwa, kusanzwisisika uye kukonzera. Uye, maererano nemuvakidzani wake Tom Britt mubvunzurudzo neabcnews.go.com, zvikamu zvemuitiro uyu wekukanganisa wakava kazhinji kacho sezvaakakura.
Achizivikanwa neBipolar disorder, Schrenker akaita izvo vazhinji vane chirwere ichi, iye aiwanzorega kumwa mishonga yake, naMichelle, vana vavo, uye vatengesi vaizoguma vachibhadhara mutengo.
Savvy Financial Investor Akachinja Crook
Schrenker ane makambani matatu emari: Heritage Wealth Management, Heritage Insurance Services, uye Icon Wealth Management.
Mudzimai wake Michelle wakabhadhara $ 11 600 semukuru wezvemari yemakambani matatu uye mubhuku wemabhuku. Akanga ariwo pabhengi reAritown Insurance Services, iro rakamupa simba rokunyorera cheki uye kubvisa mari.
Asi muna 2008 Schrenker akanga ari pasi pekuongorora muIndiana mushure mekunge zvikwangwani zvakati wandei zvakapiwa nevamwe vevatengesi vake, kutsamwiswa nemabatiro aaiita mari yavo. Shamwari, vabereki vevakidzani uye vavakidzani vaiva pakati pevatengesi vakaisa zvikwangwani.
Michelle ainge atumirawo kurambana musi waDecember 20, 2008, mushure mekudzidza nezvekusatenda kwemurume wake nemumwe mukadzi aishanda ku-airport.
Vashandi Vanotsigira Upenyu Hwakadzika
Asingazivikanwi naSchrenker, akanga aongororwa kwemakore gumi pamusana pemhosva dzakasiyana-siyana dzainge dzapomerwa kwaari. Zvadaro musi waDecember 31, 2008, vatsvakurudzo vehurumende vane zvombo zvekutsvaga, vakabata makombiyuta, mapepa akawanda epurasitiki akazadzwa nemapepa, pasi peSprenker's passports, anodarika madhora 6 000 mumari, uye musoro weLexus, kubva kumba kwaSchrenker.
Musi waJanuary 6, 2009, Schrenker akatongerwa nemabasa asingabvumirwi nemutemo nomuridzidziri akabhadhara uye mutemo usingabvumirwi nemutemo nemuridzi wekutsvaga mari. Bhaari yaive yakagadzirirwa $ 4 mamiriyoni.
Maererano naJim Atterholt, uyo aive State Insurance Commissioner, Schrenker akaraira vatengesi vakawanda "kuregera mhosva" mushure mekunge avabudisa kunze kwegore rimwe chete uye kune rimwe.
Varairidzi havana kuudzwa kare nezvemari.
Mazuva matatu gare gare, musi waJanuary 9, kambani yeSchrenker yeAfa We Wealth Management Inc. yakabudiswa $ 533,500 mutongo mushure mekunge dare rehurumende muMadlands rakatonga mukurumbira weOm Financial Life Insurance Co. Mhosva yakatsigira kuti Upfumi hweHurumende hweHurumende hwakabatanidzwa muhurumende dzishuwarenzi uye vakadzorera mishoni inopfuura $ 230,000.
Musi weSvondo, January 11, 2009, Schrenker akabhururuka kubva munhandare yemhepo kuAnderson, Indiana mune imwe-injini Piper. Akanyora nzvimbo yake kuenda kuWinin, Florida.
Sezvo akaswedera pedyo neBirmingham, Alabama, akabudisa chiratidzo chemazuva ano uye akaudza vatongi vemoya kuti akanga akuvadzwa zvakanyanya uye "akabuda ropa zvikuru" mushure mekunge piripi yepane ndege yakatumirwa.
Mushure mekunge, akaisa ndege yacho pfuti uye yakasvibiswa.
Masoja ehondo achiedza kubvisa ndege yacho yakashuma kuti musuo wendege yakavhurwa, uye jongwe rakange rima uye rakaonekwa risina chinhu. Majetti akatevera ndege isina kumira iyo yakagumburisa makiromita mazana maviri gare gare mune dutu muSanta Rosa County, Florida, makiromita makumi mashanu kubva kune imwe nzvimbo yekugara.
Mushure mekuparara, ndege yacho yakawanikwa yakashata. Vatsvakurudzi vakatsvaga ndege yacho uye vakataura kuti kwakanga kusina ropa mukati maro uye chifambiso chacho chakanga chakazara zvachose. Zviremera zvakabudisa chikwangwani cheSchrenker musungwa.
Schrenker chirongwa chakanga chiri chokunyengera rufu rwake uye kuita mhanho nokuda kwayo. Musi waJanuary 10, zuva risati rabuda parachutheni kubva pendege yake, akaendesa kuHarpersville, Alabama ndokupwanya motokari, mari nezvimwe zvinhu munzvimbo yekuchengetera. Akaudza muridzi weimba kuti aizodzoka musi weMuvhuro.
Rimwe zuva Schrenker parachutta pasi, akaiita kuChildersburg, Alabama, apo pa2: 30 mangwanani vakakumbira rubatsiro kubva kune mumwe munhu aigara. Akaudza mutori wenyika kuti akanga ari muchiitiko chengarava. Akapiwa rwendo kuenda kuguta iri pedyo uye akaenda kumapurisa emunharaunda.
Akapa mapurisa nhau imwechete yekuve mumatambudziko echikepe, uye mushure mokunge abudisa chiratidzo chake (anoshamisa) chaiye, mapurisa akamuendesa kuhotera iyo yainyoresa pasi pezita rezvakaipa ndokubhadhara mari yeimba.
Mangwanani akatevera, mushure mokunge vanzwa nezvekuparara kwe ndege uye kuti Schrenker akanga ari kumhanya, mapurisa akadzoka kuhotera, asi akanga aenda. Schrenker akakwanisa kufamba asingaoneki kuHarpersville ndokudzorera motokari yake ndokubva atakwira kOA Campground muQuincy, Florida.
Ikoko akatenga nzvimbo yematende kweusiku humwe, huni, hutanhatu yeBud Light Lime uye akapiwa rusununguko rwekupinda kwemusasa musasa.
Embarrassed uye Scared
Musi waJanuary 12, Schrenker akanyorera shamwari yake, Tom Britt, uye akanyora kuti kuparara kwakanga kusinganzwisisi uye kuti "akanyara uye akatya" kudzokera kumusha, saka panzvimbo iyo akatarirwa muhotera. Akaenderera mberi achiti "aizokurumidza kufa."
Pazuva rimwe chete, mutongi weHamilton County Superior Court akatengesa zvose Marcus naMichelle.
Vadzidzisi vomumusasa vakambomirirwa neheriff, uyo aida kuziva kana pane chimwe chinhu chisingawanzoitiki chiripo. Vakataurira huriff pamusoro pomurume akanga atarisa mumazuva akapfuura asi haana kutarisa. Pasina nguva mushure mekunge, maSorshals eUnited States akapinda mumusasa ndokuwana Schrenker, asingatombozivi uye asingatauri, akarara mukati mutende. Akanga arasikirwa neropa rakawanda kubva pamunhu akazvicheka-cheka pachiuno chake uye nzvimbo iri pedyo nehota yake. Akaendeswa kuTallahassee Memorial Hospital.
Musi waJanuary 13, Schrenker akasungwa uye akatongerwa mudare rehurumende muPensacola, Florida, achikuvadza nemaune ndege yake uye achiita kushungurudzwa kwakaipa.
Miedzo uye Kutongwa
Mumwe murume muDothan, Alabama akapiwa $ 12 Mamiriyoni mushure mokunge mutongi weAlabama atonga achifarira kuti Schrenker akanga amutengesa ndege isina kukwana.
Schrenker akateterera nemhosva kuti achinetse ndege yake senzira yekupukunyuka matambudziko ake ekuwedzera emari uye emutemo. Akatongerwa mwedzi miviri gare gare kusvika kumakore mana uye mwedzi mitatu mujeri, $ 34,000 mukudzorerwa kuCôte Guard nokuda kwekutsvaga uye kuponesa uye $ 871,000 mukudzorerwa kwa Harley-Davidson, uyo anotsigira ndege.
Schrenker akazopa mhosva mhosva mitatu yekuchengetedzwa kwekodzero uye zvikamu zviviri zvekushanda semubhengi wekutsvaga mari pasina kubhadhara. Akapiwa mutongo wejeri wemakore gumi kuti aite zvinotevera nemutongo wekare wekupera kwenyoka, uye aifanira kubhadhara madhora 633 781 mukudzorera.
Makore Matanhatu gare gare
Schrenker akasunungurwa kubva mujeri musi waSeptember 18, 2015.
The Tragic Sam Sheppard Murder Case
Chai Vang Killed 6 Vashandi muWisconsin Hunting Incident
Muurayi waHannah Wilson
Julissa Brisman: Mhosva yeCarigslist Killer
The Jennifer Hudson Family Murders
Florida Cop Killer Shot 68 Nguva Inotungamirira Kukutengesa Zvinodhaka uye Kuuraya
10 Nhoroondo dzeSouth Murder Cases
Nhoroondo yeSadistic Killer uye Rapist Charles Ng
Fetal Abduction: The Carethia Curry Case
Bhuku raB Barton Corbin
10 yevapambi vezvakaipa vanongogara
Kubudirira kweAmerica: Hondo yeMonmouth
Mutemo 18: Bhora Pakuzorora Rakatungamirirwa
Nei Kuteerera Mwari Kunokosha?
Chii chinonzi Abolitionism?
Ita Zuva Rako Rokuberekwa 18 NeZvinyorwa kubva kune Vagari
Mutauro Wemadzinza (L1)
Flo Hyman - Imwe yepamusoro yeAmerica
SUNY Albany Yakagadziriswa Zvinhu uye Zvikamu
Biography yaMadame CJ Walker
C. Anoda Tucker: Social Activist uye
Krisimasi Song Chords and Lyrics
Ko Stainless Steel Inobvisa Sei Mafuta?
Nyaya Chizadzisa Tsanangudzo uye Mienzaniso
Ndezvipi Zvakanakira Dzidzo Yepabonde Dzepabonde?
Ita Wako Magetsi Masvingo
ITenth House - Dzimba dzeAvhangeri
Kusununguka uye Kubhadhara Mutero
Gametophyte Chizvarwa cheMiti Yemazuva Oupenyu
8 Kuvhara Nziyo Dzakatinhira '90s
Yakachengeteka kuCanoe Nemwana Wako Wako Here?
The Purties Three Of Taoism
Mhemberero yeKrisimasi Rongedzo Yokutamba Ice Runharira Mhepo Ungada Here?
Vadzidzi Vachikurudzira Quotes
Vakadzi veBritish Open Winners
Fayetteville State State Admissions
Shanduro dzeSpanish Dhiyabhorosi Tsamba dzeZvamwe Zvizhinji Zvinyorwa